निर्जीवन बीमा भन्दा जीवन बीमा व्यवसायको ग्रोथ राम्रो, कसको कति ? – Insurance Khabar
निर्जीवन बीमा भन्दा जीवन बीमा व्यवसायको ग्रोथ राम्रो, कसको कति ?
प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७६, बिहीबार ११:४६
काठमाडौं । हाल नेपाली बीमा बजारमा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । सो मध्ये ३७ वटा बीमा कम्पनीको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिसकेका छन् । बाँकी २ निर्जीवन बीमा कम्पनीले भने आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को चौथो वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने क्रममा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासमा बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १ जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वित्तीय विवरणमा कुल बीमा शुल्क आर्जन उल्लेख नभएको कारणले गर्दा हामीले १८ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १८ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमा शुल्क आर्जनलाई आधार मानेर जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीले कति बीमा शुल्क आर्जन गरे भनेर विषलेशन गरेका छौ ।
बीमा कम्पनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने कुल बीमा शुल्क आर्जन रकमलाई हेर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको १८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने जीवन बीमा कम्पनीहरुको ४८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा १८ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल ७० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सोही अवधिमा १८ जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आजृन गर्न सफल भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन ४८ प्रतिशतले बढी हो ।
सबैभन्दा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गर्ने जीवन बीमा कम्पनी
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै कुल बीमा शुल्क आर्जन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले २३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । एलआइसी नेपालले १३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
त्यस्तै, नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै कुल बीमा शुल्क आर्जन यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले गरेको छ । कम्पनीले ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कुल बमिा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्ज सफल भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमा शुल्क आर्जन १८ प्रतिशतले बढी हो ।
सबैभन्दा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनी
आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै शिखर इन्स्योरेन्सले कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्ज ५ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो ।
त्यस्तै, नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै कुल बीमा शुल्क अजोड इन्स्योरेन्सले गरेको छ । कम्पनीले ४१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई दाँजेर हेर्दा
आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को चौथो त्रैमाससम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीको तुलनानमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बृद्धि गरेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल बीमा शुल्क आर्जन ४८ प्रतिशतले बढाएका हुन् भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेका हुन् ।